Jizọs bụ nwoke n'ezie
Jizọs bụ ezigbo nwoke. Strong site ya ịdị umeala n'obi na ịhụnanya.
Jesus ịma aka na-akpọ oku. Amaja obi gị Jesus ya mere, ọ na-egbo ya ike ya, udo na ịhụnanya. The ọgwụ ọjọọ, ego, highs na obodo enyi, bụ bụghị uru ndụ ma ọ bụ na-anwụ anwụ n'ihi na.
lördag 07 mars 2020 01:24 📧
Jizọs bụ ezigbo nwoke
"Ọ nwụkwara maka niile, ka ndị dị ndụ wee ghara ịdị ndụ ọzọ maka onwe ha kama maka onye nwụrụ n'ihi ha, bilie ọzọ." 2 Cor. 5:15
Jizọs bụ onye meriri onye-enwe eze, ọ bụ nanị ya kwesịrị ife ofufe.
Ọ bụ ya bụ ezigbo onye na-emecha merie ịkpọasị na ịhụnanya.
Ọ bụghị ime ihe ike
Jesus bụghị ụzọ nke ime ihe ike dị ka ọtụtụ do taa. Ha na-dị ka jụụ na ya mma na égbè, ma gịnị mere ghọtakwuo egwu na anya ha?
Jizọs bụ ezigbo nwoke. Strong site ya ịdị umeala n'obi na ịhụnanya. I nwere ike ibi ndụ maka ya bụ onye nwụrụ n'ihi gị. I nwere ike ịghara nnọọ ndụ gị.
Obi gị Jesus
Jizọs na-abụghị nanị na-ekwu okwu, ma ya onwe ya tara ahụhụ, e rojiwere na kpogidere na mgbe a kpọlitere n'ọnwụ dị ka a na-eto eto. O mere ya n'ihi na ị otú i nwere ike na-rụrụ ha n'agbụ nke mmehie na ọchịchịrị.
Live maka Jesus
Ndụ nwoke. E nweghị Jesus. Anya ya na-dị ka a ire ọkụ nke ọkụ na-enwu ọkụ na ịhụnanya gị. Ka ọkụ ka obi gị na ọkụ ya.
"E nweghị egwu na ịhụnanya, kama ịhụnanya zuru okè-achupu egwu, n'ihi na egwu nwere na-eme na ntaramahụhụ, na onye ọ bụla nke na-atụ egwu na-adịghị zuo okè n'ịhụnanya." 1 John. 4:18
Let Jesus unu guzosie na ịhụnanya ha. Mgbe ahụ ị ga-mma n'ime. Iji na-achọ nkwenye ha na gburugburu ebe obibi dị ka na-agbalị ijide ifufe - mgbe ị na-eche na ị nwere ya, ọ dị nnọọ fụọ on.
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:12